Ogaden News Agency (ONA) – R/Wasaaraha Itobiya oo Amar ku bixiyay in Mudanayaasha loosoo xulayo Baarlamaanka Somaliya lagala tasahado Safaaradda Itobiya ay ku leedahay Somaliya.
R/Wasaaraha Itobiya oo Amar ku bixiyay in Mudanayaasha loosoo xulayo Baarlamaanka Somaliya lagala tasahado Safaaradda Itobiya ay ku leedahay Somaliya.
Posted by ONA Admin	/ May 29, 2016
Shabadda Caasimada online oo kasoo baxda Muqdishu ayaa soo qortay warqad sir ah oo Gudoomiyeha Baarlamaanka Federaalka Somaliya uu soo gaadhsiiyay Jeneraal Gabre. Warqaddan ayaa ujeedada ugu weyne ay tahay in Itobiya safaaradda ay ku leedahay Xamar ay yeelato codka ugu dambeeya ee ansixinaya xulitaanka xubnaha baarlamaanka soo galaya, gaar ahaan kuwa kasocda siduu hadalka u dhigan yahay beesha Ogaden. Akriso:
Maxaa ku qornaa warqaddii Gen. Gabre uu u gudbiyey Jawaari?
Muqdisho (Caasimada Online) – Ilo wareedyo ka tirsan BFS ayaa xaqiijiyay in Guddoomiyaha Baarlamaanka Dalka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari uu warqad xiran ka helay Gen. Gabre oo ah ninka Dowlada Ethiopia u qaabilsan kala geynta Soomaalida.
Warqadaani oo ku jirtay Bashqad dhowr sharooto laga kormariyay ayaa waxaa la sheegayaa inay ku jireen warqado amar ku ah Jawaari taasi oo salka ku heysa arrimaha BFS.
Bashqada ayaa waxaa la sheegayaa inay ku jirtay 3 warqad oo laba kamid ah uu ku saxiixnaa Ra’isul wasaaraha Ethiopia Hailemariam Desalegn, halka warqada seddexaad ay aheyd mid uu kusoo lifaaqay Gen. Gabre.
Nuqul kamid ah qoraalka ayaa waxaa kamid ahaa ”Ethiopia waxa ay ku taameysaa Somalia oo ka hanaqaado halka ay taagan tahay, waxa uu heerkaasi imaan karaa baarlamaanka oo loo aqoonsada inuu yahay midka amarkiisu soconaayo”
”Waxaan guddiga sare ee baarlamaanka ku dhiirigalineynaa inay ka shaqeeyaan sida lagu soo celin lahaa baarlamanaka hadda jira, waayo kan imaan doona waxa uu waqti badan u baahnaan doonaa in lasiiyo cilmi dhanka sharciyada ah”
Sidoo kale warqada ayaa lasoo warinayaa in lagu soo hardhay qodobo farabadan oo ku saabsan arrimaha Baarlamanaka oo ay kamid yihiin:
1-In Guddoomiyaha BF uusan burburin sharciga Baarlamaanka islamarkaana ka fiirsado wax waliba oo hoos u dhac u keeni kara nidaamka jira.
2-In Guddoonka sare ee hadda jira uu ka shaqeeyo qaabka lagu soo celin lahaa Xildhibaanada hadda jira, si loo yareeyo Xildhibaano aan laheyn aqoon ku filan oo lasoo xulo.
3-In Baarlamaanka cusub xulistiisa ay wax kala socto Safaarada ethiopia ee Somalia.
4-In Xildhibaanada ka imaan doona dhanka Beesha Ogaaden ay xulistooda qeyb ka noqon karto Safaarada ethiopia ee Somalia.
Dowlada ethiopia ayaa miisaan culus ku dhex leh Siyaasada Somalia waxa ayna awoodeeda gaarsiisan tahay heer ay qeyb ka noqoto dajita hanaanka Siyaasada Somalia oo Dowlada Somalia qodobada qaar looga dhigo muqadas.
Dhanka kale, Dowlada ethiopia ayaa loolan Siyaasadeed ugu jirta sida Siyaasada Somalia ay uga qeybqaadan lahaayen Oromada ku dhex nool Somalia.